MRB အလုပ်အကိုင် HPC စီးရီးတန်ပြန်
ငါတို့အတော်များများ အလုပ်အကိုင်ကောင်တာမူပိုင်ခွင့်ထုတ်ကုန်ဖြစ်ကြသည်။ plagiarism ကိုရှောင်ရှားရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဝက်ဘ်ဆိုက်၌အကြောင်းအရာသိပ်မထည့်ခဲ့ပါ။ သင်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသင့်ထံပေးပို့ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အရောင်း ၀ န်ထမ်းများကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါသည် အလုပ်အကိုင်ကောင်တာ.
ထုတ်ကုန်များ၏ဤစီးရီးမှဆက်ကပ်အပ်နှံထားပါသည် နေရာထိုင်ခင်းကောင်တာ of Occupancy control၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသောအခါလူစီးဆင်းမှုကိုထိန်းချုပ်ရန်ရည်ရွယ်ချက်ကိုအောင်မြင်ရန်နှိုးစက်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးပို့သည်။ အလုပ်အကိုင်ကောင်တာ မင်းရဲ့ရည်ညွှန်းချက်အတွက်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်အကုန်တွင်တရုတ်နိုင်ငံ၏မြို့ကြီးတစ်ခုတွင်ယခင်က Occupancy control system မရှိပါကကြီးမားသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီဇင်ဘာလ ၃၁ ရက်နေ့တွင်ဤမြို့သည်နှစ်သစ်ကူးအကြိုပွဲကိုမစီစဉ်ခဲ့သော်လည်းများစွာသောလူတို့သည်မြို့တော်သို့အလိုအလျောက်သွားခဲ့ကြသည်။ နှစ်သစ်ကူးအကြိုအတွက်မြို့၏အထင်ကရနေရာတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့သော်လည်းမမျှော်လင့်ဘဲ၎င်းသည်ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုးတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကြေကွဲဖွယ်အဖြစ်ဆိုး၏တိုက်ရိုက်အကြောင်းရင်းမှာ Bund ရှိလူများစီးဆင်းမှုမှာအလွန်ကြီးမားခြင်းဖြစ်သည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Occupancy control system ဆိုတာမရှိလို့လူအများစုကိုပျံ့နှံ့ဖို့အချိန်ဇယားမရှိဘူး။ ဒီတော့အခုပြောကြရအောင်အလုပ်အကိုင်ကောင်တာ.
ဤမျှကြီးမားသောစီးဆင်းမှုကိုရေတွက်ရန်မည်သို့နည်း။ ဒါကိုပညာရှင်တစ်ယောက်လုပ်ရမယ်အလုပ်အကိုင်ကောင်တာ. အလုပ်အကိုင်ကောင်တာinfrared, 2D, 3D, AI နှင့်အခြားနည်းပညာများအပေါ် အခြေခံ၍ ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ပိုမိုတိကျသောရေတွက်ခြင်းနှင့်ပိုမိုတည်ငြိမ်သည့်အချက်အလက်ပေးပို့ခြင်းရှိသည်။ အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကတော့ mobile smart terminals ၏လည်ပတ်မှုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပိုမိုအဆင်ပြေလွယ်ကူပြီးပိုမိုမြန်ဆန်သည်။အလုပ်အကိုင်ရေတွက်အာရုံခံကိရိယာ ထိရောက်သောလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရောက်ရှိနေသောလူ ဦး ရေကိုမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးဆော့ဖ်ဝဲလ်မှတစ်ဆင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်အတွက်မိုဘိုင်း terminal သို့အချက်အလက်များကိုပို့လွှတ်သည်။ အစီရင်ခံစာများကိုထုတ်ယူရန်အတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသောအချက်အလက်ကိုလည်းတိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်သည်။
အလုပ်အကိုင်ရေတွက်အာရုံခံကိရိယာ ကြီးမားသောဒေတာများကိုလည်းပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ၎င်းကိုယေဘုယျအားဖြင့်ကြီးမားသောဈေးဝယ်စင်တာများ၊ ပြခန်းများ၊ စာကြည့်တိုက်များ၊ ရုပ်ရှင်ရုံများ၊ မီးရထားဘူတာများနှင့်အချို့သော tourist ည့်ဆွဲဆောင်များနှင့်အခြားအများပြည်သူဆိုင်ရာနေရာများတွင်အသုံးပြုသည်။အလုပ်အကိုင်ရေတွက်အာရုံခံကိရိယာစာရင်းအင်းများစုဆောင်းရန်။ MRBအလုပ်အကိုင်ရေတွက်အာရုံခံကိရိယာ လူများသည်လိုအပ်သည့်အချိန်ကာလအတွင်းအချက်အလက်စီးဆင်းမှုကိုထုတ်ပေးနိုင်ပြီး၊ ၎င်းသည်တိကျသောစာရင်းအင်းများ၊ ဒေတာများကိုပေါင်းစည်းခြင်းနှင့်မိုဘိုင်းဆိပ်ကမ်းများပေါ်ရှိအစီရင်ခံစာများကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်နိုင်စေရန်အတွက်နာရီ၊ နေ့၊ သီတင်းပတ်၊ လနှင့်နှစ်များအားဖြင့်ဇယားများကိုထုတ်ပေးနိုင်သည်။ Browsing နှင့် Occupancy control ကိုတစ်ချိန်တည်းတွင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ လူစီး ၀ င်မှုသည်သတ်မှတ်ထားသောတန်ဖိုးထက်ကျော်လွန်ပါကနှိုးစက်တစ်ခုပေါ်လာလိမ့်မည်
ကျွန်တော်တို့မှာ IR အမျိုးအစားများစွာရှိသည် အလုပ်အကိုင်ကောင်တာ, 2D, 3D, AI အ အလုပ်အကိုင်ကောင်တာ, သင်နှင့်ကိုက်ညီမည့်တစ်ခုအမြဲရှိသည်, ကျေးဇူးပြု။ ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ, ငါတို့အသင့်တော်ဆုံးအကြံပြုလိမ့်မည် အလုပ်အကိုင်ကောင်တာ 24 နာရီအတွင်းသင်တို့အဘို့။
ရှေ့သို့ MRB ကြိုးမဲ့သူများသည် HPC005 ကိုတန်ပြန်သည်
နောက်တစ်ခု: ဘတ်စ်ကား HPC168 အတွက် MRB အလိုအလျောက်ခရီးသည်ကောင်တာ